निषेधाज्ञाको समयमा मुनाफामा रहेका व्यवसायहरू «
निषेधाज्ञाको समयमा मुनाफामा रहेका व्यवसायहरू
विश्वभरि नै कोरोना भाइरसले वितण्डा मच्चाइराखेको छ । यस्तो भयावह परिस्थितिमा सर्वसाधारणले कोरोनाको खोप लगाउन पाउँदा सबैले निकै सुरक्षित महसुस गरेका छन् । उपत्यकामा अझै पनि निषेधाज्ञा जारी नै छ, तर जनताका समस्याहरूलाई मनन गरी निषेधाज्ञालाई निकै खुकुलो पारिएको छ ।
अहिले पनि धेरै भीडभाड हुने स्थानहरू गोष्ठी, खेलकुद प्रतिष्ठान, जिमखाना, सिनेमा हल, पार्लरजस्ता विभिन्न निकायहरू खोल्न अनुमति दिइएको छैन, तर यसबाहेक अन्य संस्था तथा पसलहरूको हकहितमा भने बिहान ६ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म खोल्न पाइने नियम लागू गरिएको छ । त्यस समयमा सम्पूर्ण व्यवसायहरू ठप्प भएको थियो ।
कोभिडका कारण नेपालको अर्थतन्त्र निकै खस्किसकेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपश्चात् सर्वसाधारणहरू आर्थिक स्तर उकासिनेप्रति निकै आशावादी भएका छन् । निषेधाज्ञाको समयमा कपडा पसल, कस्मेटिक, पार्लर, होटललगायत विभिन्न वित्तीय संस्थाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिएका कारण यस्ता व्यवसायीहरूले निकै घाटा बेहोर्नुपरेको थियो । आफ्नै घरमा पसल तथा व्यवसाय गर्नेहरूलाई सटरको भाडा तिर्न नपर्ने हुनाले केही फरक परेन होला, तर जसले ऋण काढेर व्यवसाय गरिराखेका थिए, उनीहरूलाई सटर भाडालगायत ब्याजसमेत तिर्नुपर्दा कतिपयले पसल छोडेर भागेका तथा बेचेर पूरै ऋणमा समेत डुबेका छन् ।
त्यस्तै यातायात व्यवसायी तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूको पनि यही व्यथा रहेको छ । तर, अत्यावश्यक सेवाहरू जस्तै मेडिकल, खाद्यान्न, फलफूल पसल, मासु पसल, सरकारी कार्यालय, बैंक, सेयर मार्केटजस्ता वित्तीय संस्थाहरूले भने निषेधाज्ञाको समयमा समेत निकै मुनाफा कमाएका थिए । सरकारले झनै राजस्वको रकम बढाएर समेत उठाएको थियो । अन्य संस्था घाटामा गई कैयौं मानिसले आफ्नो रोजगारी गुमाए पनि सरकारी कर्मचारीको हकहितमा भने बजेट भाषण भएलगत्तै वार्षिक रूपमा तलब वृद्धि भइराखेको छ ।
त्यस्तै किराना, तरकारी तथा फलफूल पसलहरूले पनि यस समयमा निकै राम्रो व्यापार गर्ने मौका पाएका थिए । दिनभरि बसेर गरिने व्यापार दिनको दुईदेखि तीन घण्टाभित्र गर्ने गरेको देखिन्थ्यो । सम्पूर्ण मानिसहरू निषेधाज्ञाका कारण घरमा बस्नुपरेकाले आफ्नो गच्छेअनुसारले परिकारहरू पकाएर खाने गरेको र रोगसँग लड्नका लागि सन्तुलित आहार खानुपर्छ भन्ने मनस्थितिका कारण अन्य समयको भन्दा निषेधाज्ञाको समयमा खाद्यान्नका सामानहरू धेरै खरिद गर्ने गरिएको स्वयम् मेरो आफ्नै अनुभव छ ।
निषेधाज्ञाका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूले गाडामा बेचबिखन गर्नाले अझै सहज रूपले घरदैलोमा फलफूल तथा सब्जीहरू खरिद गर्न पाइएको थियो । फलफूलहरू पनि गाडीमा ठूलै मात्रामा बेचबिखन गर्नाले उनीहरूलाई त मुनाफा भयो नै, साथै हामीहरूलाई पनि छनोट गर्न र सस्तो तथा सुलभ तरिकाले खरिद गर्ने अवसर प्राप्त भइराखेको थियो ।
त्यस्तै कतिपय बैंकहरूले कोरोनाको कारण देखाई बचत खाता तथा मुद्दती खाताहरूको ब्याजदर घटाएका थिए । स्वयम् मेरो सानिमा बैंकमा सुरुवातमा ५ प्रतिशतमा बचत खाता खोलेकोमा अहिले कोभिडको कारण देखाई ब्याजदर घटाएर २.५ बनाइएको छ । तर, अचम्म त्यहाँ लाग्छ कि यदि बैंक नाफामा गएको भए के बैंकले मेरो बचतको प्रतिशत वृद्धि गथ्र्यो ? कदापि गर्दैन ।
त्यस्तै अहिले जनताको आर्थिक स्तर खस्किएको छ, कर रकम तथा ब्याज केही छुट तथा मिनाहा गरांै भनेर कुनै नियम कानुन लागू गरियो त ? त्यस्तै लगानीकर्ताहरूले पनि घरमै बसी–बसी सेयर मार्केटमा लगानी गरी लाखांै फाइदा कमाएका छन् ।